एटिएमको १२ लाख भन्दा बढि रुपियाँ मुसाले काटेपछि…
नयाँदिल्ली,भारतिय पुर्वी राज्य आसममा बिग्रेको पैसा निकाल्ने एटिएम मेसिन बनाउने प्राविधिज्ञहरु मेसिन खोलेर हेरेपछि स्तब्ध भएक छन् । तिनीहरुले त्यसभित्रको झण्डै १२ लाख भन्दा बढि भारतिय
तिन अर्वको अभियोगमा १० लाखको धरौटी !
काठमाडौं । असार ८ । तिन अर्वको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई अदालतले १० लाख धरौटी बुझाएर छाडन आदेश दिएको छ । विदेश जाने कामदारबाट झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ
एमाले–माओवादी एकताको निर्णयमा एमाले महासचिबलेनै हस्ताक्षर गरेका रहेनछन,हस्ताक्षर नगर्नेमा को को छन ?
काठमाडौं । असार ८ । एमाले र माओवादी बिचको एकतामा एमाले र माओवादी केन्द्रका केहि प्रभावशाली नेताहरुलेनै हस्ताक्षर नगरेको खुलासा भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
काठमाडौंको बौद्धमा भर्खरै गोली चल्यो, एक घाइते
काठमाडौं । असार ७ । काठमाडौंको बौद्धमा गोली चलेको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले लुटपाटमा संलग्न भएका सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे घर भई हाल गोकर्णेश्वर बस्दै आएका
विद्यालयमा सिकाई सुधारका लागि अभियान चलाउन आग्रह
काठमाडौं । विद्यालय स्तरको खस्कदो सिकाइ उपलब्धि प्रति सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले सिकाइ सुधारका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेका
नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजले सर्लाहीमा जीविकोपार्जन सुधार, महिला सशक्तिकरण तथा जनचेतना कार्यक्रम” को सुरुवात
काठमाडौं।असार ६। नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजले “जीविकोपार्जन सुधार, महिला सशक्तिकरण तथा जनचेतना कार्यक्रम” को तेश्रो चरण सर्लाही जिल्लामा सुरुवात गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई भारतीय दूतावासले सहयोग गरेको छ
सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेकोमा स्वास्थ्यमन्त्रीको चिन्ता
वीरगन्ज । उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मंगलबार वीरगन्जस्थित नारायणी अञ्चल अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणपछि मन्तव्य राख्दै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले देशकै पुरानो अञ्चल अस्पताल
स्व. विन्दु देवी पाण्डे महिला पत्रकारीता पुरस्कार महिला पत्रकार कविता खड्कालाई
वीरगंज ५ असार । नेपाल पत्रकार महासंघकी संस्थापक सदस्य स्व. विन्दु देवी पाण्डेको स्मृतिमा स्थापित महिला पत्रकारीता पुरस्कार २०७५ बाट महिला पत्रकार कविता खड्का पुरस्कृत भएकी
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा ३४ वर्षीय गणेश दुलालको मृत्यु
काठमाडौं । असार ५ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिका(१ मनहरा पुल नजिक ना।६ ख ५६४० नम्बरको ट्रकले बा।८८ प २८० नम्बरको मोटरसाइकललाई मंगलबार ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक सोही नगरपालिका(३ राधे
राजनीतिक दल भनेको विचार, सिद्धान्त र वादमात्रै होइन, आन्दोलनको निरन्तरता समेत हो । नेपालमा केही राजनीतिक दलहरू विचार सिद्धान्तले स्थापित भए भने केही आन्दोलनको निरन्तरताले गर्दा
गोलाप्रथाबाट महिला सदस्यहरुको पदावधि निर्धारण
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभाका महिला सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ । सोमबार संघीय संसद् भवनमा गरिएको गोलाप्रथाबाट पदावधि निर्धारण गरिएको हो ।
काठमाडौं । कृषकलाई उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योग र मापदण्ड नपुगेका क्रशर उद्योगलाई कारबाही गरिने भएको छ । सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र
अन्तिम पटक देवकोटाले भनेका थिए – ‘अगाडीको यात्रा मलाई एक्लै गर्न देऊ’
दीपक दाहाल काठमाडौं – गम्भीर रोगको ६ महिनाभन्दा लामो उपचार प्रयत्नको प्रतिफल निरन्तर निराशाजक आइरहेको थियो। महत्वपूर्ण अंगको कार्य घटिरहेको थियो। शनिबार राति उपेन्द्र देवकोटाले आफन्त र
काठमाडौं । वरिष्ठ न्युरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको सोमबार साँझ निधन भएको छ । पित्तथैलीको क्यान्सरबाट पीडित उनको बाँसबारीस्थित नेसनल इन्ष्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल तथा एलाइड साइन्स (न्युरो अस्पताल)
११८ जनाको जम्बो टोली सहित प्रधानमन्त्री भोली चीन प्रस्थान गदै, को को छन् प्रतिनिधिमण्डलमा ?
काठमाडौं । असार ४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ११८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित भोली चीन प्रस्थान गदै छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा चार मन्त्रीहरु सहित उद्योगी, व्यवसायीहरु, पत्रकार
देउवाको नेतृत्व असफल भयो, अब सक्षम नेतृत्व ल्याउनुपर्छ ः सुजाता कोइराला
काठमाडौं, ४ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व असफल भैसकेको आरोप लगाएकी छिन् । सोमबार रिपोर्टर्स
चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । उहाँले आफ्नो चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउने तयारी रहेको छ । संसदको अपराह्न ४ बजे बस्ने
५९ सांसदको आज गोलाप्रथाबाट भाग्य परीक्षा गरिँदै
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका लागि सांसदको कार्यकाल गोला पर्थाबाट आज तया गरिदैँ छ । सोमबार ५९ जना सांसदको कार्यकाल तय गरिने भएको हो । गोलाप्रथाबाट १९ जनाको दुई
नेपाल प्रहरीका ५० डिएसपीको सरुवा, प्रहरी बृत्तका प्रमुख देखि जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेत फेरीए, कस्को सरुवा कहाँ ?
रबिन थपलिया । काठमाडौं । असार ३ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका ५० डिएसपीको सरुवा गरेको छ । काठमाडौंका केहि बृत्तका प्रहरी प्रमुख सहित जिल्ला
माग पूरा नभए सशस्त्र विद्रोह गर्ने मिसन सिन्धुलीगढि मोर्चाको दियो चेतावनी
काठमाण्डौ । मिसन सिन्धुलीगढि राष्ट्रिय मोर्चाका संरक्षक गोविन्द बोहरा ‘बह्रमाण्ड’ ले चिकित्सा विद्येयक खारेजीको माग राख्दै ५३ औं दिनदेखिको आमरण अनशनलाई स्थगन गरेको जानकारी दिएका छन्
नेपाल प्रहरीका २८ एसपीको पदस्थापन, अख्तियारमा मात्र ६ एसपी पठाइयो, को कहाँ पदस्थापन(पत्र सहित)
रबिन थपलिया । काठमाडौं । असार ३ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै मात्र बढुवा भएका २८ एसपीको पदस्थापन गरेको छ । नयाँ बढुवामा परेका एसपी शेखर खनाललाई
नुवाकोटमा सामाजीक संघ/संस्थाको नविकरण र दर्ताका लागि सिडीयो कार्यालयले राख्यो यस्तो सर्त
काठमाडौं । असार ३ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले सामाजीक संघ संस्था दर्ता र नविकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले आज सार्वजनीक सुचना प्रकाशीत
तिन दिन देखि अरुण तेस्रो ड्याम साइडमा पुरीएका चारजना अझै भेटिएनन
काठमाडौं । असार ३ । तिन दिन देखि अरुण तेस्रो ड्याम साइडमा पुरीएका चारजना अझै भेटीएका छैनन् । संखुवासभाको मकालु गाँउपालिका फ्याक्सिन्दामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको ’ड्याम साइड’को
Pages 489 : You are at page 363 of 489